रातो टि–शर्टमा केशु | कारण यस्तो पो ! (फोटो फिचरसहित) | Screennepal
रातो टि–शर्टमा केशु | कारण यस्तो पो ! (फोटो फिचरसहित)
२०७४, ५ फाल्गुन शनिबारscreennepalhot news, Music0
काठमाडौं, ५ फागुन । ‘रातो राम्रो, गुलियो मिठो’ भन्ने भनाइ नै छ । यही भनाइको तात्पर्यलाई अँगाल्दै रातो धेरैको रोजाइभित्र पर्छ ।
यस्तै, गायिका केशु गुरुङलाई पनि रातो मनपर्दोरहेछ । रातो रंगलाई प्रेमको प्रतिक पनि मानिन्छ । भनिन्छ, ‘रातोमा रमाउने चाहनेहरु झोकी, दयालु र सेक्सी हुन्छन् ।’ यिनै झोकी तर, दयालु स्वभावकी केशुले प्रेम दिवश अर्थात ‘भ्यालेटाइन–डे’ गएपछि आफूलाई मनपर्ने रातो रंगको टि–शर्टमा शेल्फी खिचेर फेसबुक वालमा पोस्ट गरिन् । ती उनका फोटोहरुले राम्रै लाईक र कमेन्ट पाइरहेको छ । तर, रातो टि–शर्टमा शेल्फी पोज फेसबुकमा पोस्ट गर्नु ‘भ्यालेनटाइनसँग सम्बन्धित नभएको’ केशुले बताइन् ।
आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा रातो टि–शर्टमा शेल्फी पोज पोस्टबारे केशुले भनिन्, ‘रातो रंग मेरो फेभरेट हो । मलाई रातो र पिंक कलर मनपर्छ ।’ हुन पनि आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेका अधिकांश फोटाहरु रातो रंगकै पहिरनमा देखिन्छिन् उनी । नपत्याए केशु गुरुङ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।
केशु पेसाले त स्वास्थ्यकर्मी हुन् । तर, उनको सौख र रुचि भने गायनमा छ । विशेषगरी गुरुङ संस्कृति झल्काउने कौरा र सालैजो भाका गाउन रुचाउँने केशुले भनिन्, ‘मलाई कौरा गाउन मनपर्छ, जसले आफ्नो पहिचान र संस्कृति पनि झल्काउँछ ।’
आधा दर्जनभन्दा बढी उनले कौरा गाइसकेकी छन् । यी स्वास्थ्यकर्मीको स्वर निकै मिठो छ । लाग्छ, केशु कुसल स्वास्थ्यकर्मी नभएर एक कुसल गायिका हुन् । उनको लक्ष्य पनि त्यही छ, ‘एक दिन अवश्य कुसल कौरा गायिका भनेर चिनिने छु ।’
तनहुँ, बन्दीपुर धरमपानीकी केशु करिब ६ वर्षयता एक गैरसरकारी संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा कार्यरत छिन् । ‘दमौलीस्थित कम्युनिटी सर्पोट गु्रप’ नामक स्वास्थ्य संस्थामा ‘केस मेनेजर’का रुपमा कार्यरत केशु बेला–बेला राजधानी आउँछिन् । त्यसैबेला उनी कौरा गीत रेर्कड गराउँछिन् । उनलाई गायनमा रेशम गुरुङ, दुर्गा गुरुङलगायतका अग्रज कलाकारहरुले साथ दिँदै आएका छन् । उनीहरुकै साथ र सहयोगकै कारण ‘कार्यलयको व्यस्तताका बाबजुद आफ्नो रहर र इच्छाहरु पूरा गर्दै आएको केशुले सुनाइन् ।
केशुका अनुसार कम्युनिटी सर्पोट ग्रुपले एचआईभी एड्स संक्रमितबारे अध्ययन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ । मानवीय स्वास्थ्य संवेदनासँग जोडिएको पेसा अँगालेर पनि गायनमार्फत आफ्नो कला र संस्कृतिलाई सम्वद्र्धन गर्ने केशुको प्रयत्नलाई सलाम गर्नैपर्छ ।
Previous Post‘भ्यालेन्टाइन–डे’ डान्स पार्टीमा गोलीहानी ७ को हत्या ! Next Postयसरी मनाइयो ‘ग्याल्बो ल्होसार’ (फोटो फिचरसहित)